SiFive HiFive Yakasunungurwa iri pano uye unogona kumhanya Linux | Linux Vakapindwa muropa
SiFive Iyo ikambani inogona kunge isinganzwike zvakare kujairika kwauri, asi ikambani yakwanisa kumutsidzira kana kuunza ISA dhizaini kubva kuhope kwayo RISC-V, RISC yekuvakisa yaiita senge yakasiiwa yakafanana neMIPI, iyo yakamutswa zvakare kuti igadzire mamwe mapurojekiti eSBC. Aya marudzi emabhodhi, senge Raspberry Pi uye makwikwi, anowirirana neakasiyana GNU / Linux distros.
Asi kusiyana nePi, bhodhi SiFive HiFive Yakasunungurwa Iyo haina kubva paARM kana x86 machipisi sedzimwe, asi yakavakirwa paRISC-V inova imwe yemaitiro ekushamisa sezvandakataura mundima yapfuura, saka zvakafanira kuti Linux kenel iitsigire uye iyi ndiyo kesi ye penguin yedu yepakati. Saka avo vanowana imwe yeaya HiFIve Unleashed mabhodhi vachakwanisa kumhanyisa Linux pasina dambudziko uye kuyedza zvakanakira nekuipira kweiyi nyowani microprocessor ...
Uye chip ichi chine chii? Huye, zvirokwazvo haisi yepamusoro-soro, kana kutaura kwakanyanya kusimba senge maARM, uye haisi iyo ine simba zvakanyanya maererano nekuita, asi inoita kuita kunogamuchirwa uye mukudzoka inotipawo chimwe chinhu icho vamwe vasina ... uye ndeyekuti chivakwa Yemahara-isina ISA. RISC-V iri kuwana vateveri uye vazhinji vanofarira mapurojekiti akavakirwa pairi nekuda kweiyo chivakwa uye nekutenda kune basa rakaitwa naani akaigonesa.
RISC-V yakabuda kunze kwebasa rekuvandudza rinoitwa nevanoongorora kubva ku University of Berkeley iyo yakabatanidzwa nemipiro yakawanda uye yakakosha yekunze avo vaida kubatana Ichokwadi kuti maSoC ekutanga akavakirwa paRISC-V aingova eIoT nemidziyo yakadzamidzirwa, asi SiFive yakawana kuita kwakakwana muRusununguko U540 uye neHiFive Unleashed board kuti ikwanise kumhanya neLinux pasina matambudziko.
Mamwe mashoko - SiFive
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SiFive HiFive Yakasunungurwa iri pano uye unogona kumhanya Linux
Zvakanakira kwete Zvakanakira
Ndatenda kwazvo neshumo, yaive chokwadi chikanganiso chikuru kwandiri uye ndinokumbira ruregerero. Ini ndanyora "zvakanakira" chiuru nguva uye ndinoziva zviri naV, asi kunyora iyi positi ndanga ndaneta uye ndakakanganisa kukuru. Icho hachisi chekupembedza, ini ndichaedza kusaita zvimwe zvikanganiso zverudzi irworwo.
Seshiri ndakaverenga uye ndanyatsotaura kuti "edza mabhenefiti" paanofanirwa kunge ari "mabhenefiti". Kwaziso.
Kutenda nekuzivisa bug.
Tiri tikismikis isu tiri, "kunyangwe ndichifunga zvakafanana, v no b"
hahaha ivo vari soretes .. uye wadii kunyora chimwe chinhu iwe mapenzi .. ndinotenda Isaac nemupiro wako, kumbundira kukuru.